I-SimplyCast: Ipulatifomu Yokuxhumana Kwamakhasimende | Martech Zone
I-SimplyCast: Ipulatifomu Yokuxhumana Kwamakhasimende
NgoMsombuluko, Ephreli 7, 2014 NgoLwesithathu, Januwari 21, 2015 Douglas Karr
The I-SimplyCast 360 Automation Manager ihlanganisa ukuphuma kweziteshi eziyi-15 kupulatifomu eyodwa, enika amandla ama-marekter ukwakha imikhankaso yokuthengisa ezenzakalelayo nokugeleza kokuxhumana. Isixazululo sabo sikuvumela ukuthi ufinyelele kubantu abalungile ngesikhathi esifanele ngemodi yabo yokuxhumana abayithandayo. Bandakanya namakhasimende namathemba asuselwa kudatha egciniwe, izintshisekelo zabo, kanye nokusebenzisana kwabo kwangaphambilini nenhlangano yakho ukukhulisa imbuyiselo yakho ekutshalweni kwemali.
The I-SimplyCast Isixazululo sokumaketha sikuvumela ukuthi usethe imikhankaso yakho njengeshadi lokugeleza, ikuvumela ukuthi ufinyelele futhi uzibandakanye namathemba akho namakhasimende ngeziteshi eziningi:
Ukuphathwa kobudlelwane beKhasimende - Yazi kahle ukuthi obani abaholi bakho abashisayo nokuthi zingathandwa kanjani izidingo zabo.
imeyili Marketing - Dala, thumela futhi ulandelele imikhankaso yokuthengisa ye-imeyili.
Uhlu Lomphathi - Dala, gcina futhi uhlukanise uhlu lwakho lokuxhumana nomthamo wokugcina ongenamkhawulo.
Ifomu Builder - Dala amafomu aku-inthanethi ngomkhiqizo olula kakhulu emakethe. Alukho ulwazi lwe-HTML oludingekayo.
Amakhasi okufika - Indlela esheshayo nelula yokwenza amakhasi amaningi okufika ukuze ulandele ukuthi yiliphi ikhasi elisebenza kahle kakhulu.
Ucwaningo Oluku-inthanethi - Dala futhi uthumele izinhlolovo eziku-inthanethi ezidonsa impendulo yomsebenzisi ngemizuzu.
Ukulandelela Isixhumanisi - Landelela kalula ukuchofoza namanani avulekile ukusiza ukuthola ukuthi yikuphi ukumaketha okusebenza kahle kakhulu.
Umbhali ozenzakalelayo - Yakha ubudlelwano obuqinile nobusheshayo ngesixazululo sabo sokulandelela esizenzakalelayo.
Gada Uhlu Olumnyama - Musa ukuthatha ithuba ngengqalasizinda yakho yezokumaketha kanye nedumela lakho. Qala ukuqapha i-IP yakho namuhla.
Ukumaketha Kwefeksi - Thumela ukuqhuma kwefeksi ezinkulungwaneni zezinhlangano ngaphandle kwenkinga. Ilungele ukukhomba amabhizinisi endawo.
Ukuphathwa Kwemicimbi - Imikhankaso yomcimbi enamathuluzi okukhulisa abakhona.
Ukusakaza Ngezwi - Sakaza ngokuzenzakalela imilayezo yezwi ukuze wazise futhi ukhumbuze amakhasimende akho.
Ukubhalwa Kombhalo - xhuma namakhasimende akho ngokubeka umyalezo wakho ezandleni zabo.
Ukumaketha Komphakathi - hlanganisa namanethiwekhi omphakathi athandwa kakhulu namuhla, kufaka phakathi i-Facebook ne-Twitter.
Tags: umphenduliukuqapha kohlu lwabamnyamaimeyili Marketingukuphathwa kwemicimbiFacebookifeksiifeksi marektingifomu builderamakhasi okufikauhlu lokuphathwaizinhlolovo ezenziwa onlineukwahlukanisaukumaketha komphakathiukumaketha umbhaloTwitterukusakaza ngezwi
I-Cirrus Insight: I-Salesforce ne-Gmail Integration
Umhlahlandlela we-A kuya ku-Z Wokuzenzela Umkhiqizo Wakho